Lameen woljaalatan gargar bayuun dubartii irra hubaatii sammuufi qaamaa cimaa geessa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Lameen woljaalatan gargar bayuun dubartii irra hubaatii sammuufi qaamaa cimaa geessa
Lameen woljaalatan ykn dhiirsaafi niitiin gargar bayuun nama addaan deeme hunda irra miidhaa gosa adda addaa (keessumattuu isa qaamaafi sammuu ) qaqqabsiisa. Ta’us hundi namaa miidhaa sammuufi qaamaa wolfakkaataa ykn sadarkaa tokkoo keessa darba jechuun hindanda’amu. Gaafiin yeroo heddu ka’aa ture yeroo lameen woljaalatan addaan bayan dhiiraa moo dhalaadha kan irra hubaatii qaamaafi sammuuf saaxilamu isa jedhu ture. Amma garuu gaafiin kuni deebii kan argate fakkaata.
Gaafii kana deebisuuf Yunivarsiitiin Binghamton fi Yunivarsiitii Kolleejjiin Landanii qorannoon gadi fageenyaa geggeessaa turaniiru. Qorannoon kuni kan geggeeffame namoota 5,705 irratti biyyoota 96 keessatti. Qorannoo kanaan kan ifa taasifame, tarii akkuma isinuu tilmaamuu hinoolle, yeroo lameen woljaalatan addaan deeman hubaatiin cimaan kan gayu dubartoota irra. Gargara bayuun dhiiras haalaan rifachiisa; sochoosa. Addaaddummaan waa’ee sadarkaa qofa. Maddaallii sadarkaatiin yoo ilaalllamu addaan deemuun hedduu kan hadhaayu dubartootatti.
Wonti qorannoon kuni dabalataan ifa godhe yoo jiraate midhaan hamaan dubartoota irra gayu, gara jalqabaatti hangamuu hadhaayaa haa ta’uu, umrii kan hinqabne ta’uu isaati. Dubartoonnii yeroo nama jalataniin addaan bayuuf dirqaman qamaafi sammuunis baay’ee kan hubaman ta’us; miidhaa isaan irra gaye irraa kan dandamatan saffisaan. Faallaa kanaa, dhiirri gara jalqaba irratti hanga dubartootaa kan hinmiidhamne ta’us rakkoo isaan mudate kana irraanfachuu ykn dandamachuu (bayyanachuuf) yeroo dheeraa kan isaan gaafatu ta’uun barameera.
Dubartoonni yeroo waahila isaaniitiin gargar bayan kan akkas hubamaniif, akka qorannoo kanaatti, yeroo dhiira woliin jiraataa turanitti woliin jireenyi isaanii, kan worra dhiiraa irra, qaamaan qofa osoo hintaane qalbiis hedduu kan hirmaachise waan ta’eef.
hariiroo dhiiraafi dhalaa
Previous articleBarbareen nyaata mi’eessuuf qofa osoo hintaane umrii dheeressuufis faaydaa qabdi
Next articleGaliin Itoophiyaan woggoota shanan alergii irraa argatte karoora GTP I gadi ta´uun beekame